SingForYou.net - Min Thi Phoe Kaung Tae
Min Thi Phoe Kaung Tae
By : myobala on Dec 24, 2009
Score: 60 Rating: 5.00 Comments: 21
Min Thi Phoe Kaung Tae's Description
flipflop on Dec 27, 2009 0
kg ba eih :] 5*
winwinthant on Dec 25, 2009 0
အိုး ကောင်းတယ် ကောင်းတယ် အခုမှပဲ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကြားရတော့တယ် *************************
moeluu on Dec 24, 2009 0
NIce one.. (ko)bala, keep going.. all* & Merry X'mas!
paradise on Dec 24, 2009 0
wowwwwww doc bro gyi also......rockker gyi pit twar pi lar...!!!!!!!!!yayyyyyyyyy rock naing tal tort......unbelieveable........~~~~~~~amazing...~~~~~~☆。*。☆。 ★。＼｜／。★ Merry X'mas and Happy 2010.. 새해 복 많이 받으세요 ★。／｜＼。★ 。☆。*。☆。 *。★。*"
u4gyi on Dec 24, 2009 0
Ko Bala gyi... good del byar... ar pay twar del byo...voted twar tay del bya...*****
panshwe on Dec 24, 2009 0
အဟဲ .. ပိုက်ဆံအကုန်သက်သာလို့ မဟုတ်ဘူးလား .. ဆွေးနိုင်လို့တော့ မဟုတ်လောက်ဘူး .. :P .. ********************* တွေပေးသွားတယ် အစ်ကိုကြီးရေ .
myobala on Dec 24, 2009 0
ဟဟဟ..အကို့ညီမလေးက တယ်သိပါလား....ကိုယ်ရှာတာ ကိုယ့်ဖာသာအကုန်သုံးရတာပေါ့ကွယ်.....ဟုတ်ဘူးလား....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် မပန်းရွှေလေး........
susannyunn on Dec 24, 2009 0
kel kel ...min ti poe kg te te...paw kone p nawt..... ti lite tot ti lite tot wayyyyyyyyyyyyyyyy...aheeeeeeee:))))
အင်း.....ဘယ်တူ့ကို ညားတိခိုင်းလိုက်ရမှာပါလိမ့်....ခက်တာက ဒီမှာဘုရားလည်းရှိဘူး...ကန်တော်ကြီး နဲ့ အင်းယားလည်းရှိဘူး........ဟိဟိ...တီတီ ကလေးရေ......ကျေးဂျူးတင်ပါတယ်နော့......
forevermoe on Dec 24, 2009 0
ko g myoo yay ..vote lo ya tot woo ..ment pae yay twer tal norr ...d nay tot aww tae song twe paee ...mite tal kwarr..doe ko g ka tot ..:Pdsong lay so htar tar gooddd tal ..********************for ko g myoo..:D
ညီမလေးရေ...ရပါတယ်ကွယ်...အကိုနားလည်ပါတယ်.....တခါတခါ စိတ်ရူပ်လို့အော်မိတာပါ.....အသံတောင်နည်းနည်းဝင်သွားတယ်......ဒါပေမယ့် ခေါင်းတော့နည်းနည်းပေါ့သွားတယ်....ဟိဟိ..ကျေးဇူးနော် မိုးမိုးရေ.....
turikimuriki on Dec 24, 2009 0
so naing lite tar nor , bro gyi yay. arr pay ya tar maw lar pi , hee hee . nice 1 par nor. 5* again.
ဟိဟိ....ဆောရီးပါ ညီမလေးရေ....အကိုကတခါတခါသီချင်း တွေနဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက်ရှာတတ်လို့ပါ .....နားလည်အားပေးသွားတာကျေးဇူးပါပဲကွယ်.....
achitsonethu on Dec 24, 2009 0
ar pay twar tal nar htaung loh kg tal song tway akhu ma atet win tar boys so so top :DDDD
သမီးလေးရေ....ဦးဦးက အသက်နည်းနည်းကြီးလာတော့ အော်ရတဲ့သီချင်းတွေကို သိပ်မကြိုက်တော့ဘူးကွ.....သမီးလေးလည်းအသက်နည်းနည်းကြီးလာရင်သိလာမှာပါ.....ဘာဘဲပြောပြော ဦးဦး သမီးလေး အရာရာမှာ ကံကောင်းပါစေကွယ်......
maryaung on Dec 24, 2009 0
rrr atr loot bala gyi yay,, thi pho kg tal naw... htate htar lay htat ma pyaw chin woo ,, honttttttttt((((hehehe)))))
ထိပ်ထားလေးက သိပ်စိမ်းကားတာပဲကွယ်...ကျွန်တော်မျိူးရဲ့သီချင်းတွေကိုအားမပေးတာကြာပေါ့....သိတတ်ပါတယ်ဗျာ....ဒီနေ့အဖို့တော့ထပ်မဆိုတော့ဘူး....နောက်နေ့တွေစိတ်ပေါက်တဲ့အချိန်မှ...ဟိဟိဟိ....ထိပ်ထားလေးလဲ သင့်တော်တဲ့ကြင်ယာတော်မြန်မြန်ရပါစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျားးးးးးး
sandy12 on Dec 24, 2009 0
ko myobala ma maw tay buuu lar ...de so tar tat ta chin arr loon lo lo ar kg tal clap...clap......clap,,,,,,,,,de ta kar tot 5********pay lite beeeeemaw>>>>>>>>>
ဒီတခါ ပေးလိုက်ပြီ ဆိုတော့ ခုနကမပေးတာ စန္ဒီ ပေါ့ ဟုတ်လား.....တယ်ဆိုးတဲ့စန္ဒီပဲနော်....ဟိဟိဟိ....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်သူငယ်ချင်းရေ....အရာရာ အဆင်ပြေပါစေနော်........
khaki on Dec 24, 2009 0
so nice bro....it really nice with yours vocal....sing more naw.....kakhi arr pay torr par tal byar
ဟိဟိ..တော်ပြီ...မောလါပြီ........ဘေးခန်းက လည်းသိပ်အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူး....ညီလေးဖာသာဆက်ဆိုတော့ အကိုအားပဲပေးတော့မယ်.......ကျေးဇူးပါနားထောင်ပေးတာ....